गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदै शंकर विसी – Todays Nepal
गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदै शंकर विसी
नाच्नकै लागी जन्मिएका हुन, शंकर विसी । २०५१ सालमा नेपालगन्जबाट काठमाडौं छिरेका बिसी म्युजिक भिडियोको पर्याय नै बनेका छन। नेपाली गीत संगीतको ईतिहासमा दर्जनौं हैन सयौं पनि हैन हजारौं हजार भिडियोमा काम गरेका शंकर नेपाली मनोरन्जन क्षेत्रका चम्किला नक्षत्र हुन।
आजसम्म तिन हजार दुई सय भिडियोमा आफ्नो अभिनय र नृत्य कौशलता प्रस्तुत गरिसकेका उनले झण्डै पाँच हजार भिडियोहरु निर्देशन गरिसकेका छन् । हरेक तिजको सिजनमा उनका न्युनतम पचास वटा जति भिडियो आएकै हुन्छन तर यो तिजको सिजनमा भने पारिवारिक कामको शिलसिलामा अमेरिकामा अल्झिनु परेको छ उनलाई ।
अहिलेको विवादास्पद नेता तत्कालिन समयका चर्चित लोक गायक थिए रेशम चौधरी। उनकै गीत ‘पुकुम बेसी’ बाट शंकरले अभिनय र निर्देशन यात्रा सुरु गरेका हुन। उनको अभिनय यात्रामा हिट बनेर “डाँडै माथी जुन” उदायो र उनको जिन्दगीकै टर्निङ प्वाईन्ट बनेर “सुपारी चाम्रो” भन्ने गीत आयो। यी दुई गीत एकै समयमा हिट भएका थिए ।
सुपारी चाम्रो पछि नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा शंकर विसी र सम्झना बुझाथोकीको जोडी अपरिहार्य जस्तै बन्यो। हरेक हिट गीतमा उनीहरुको जोडी देखिन थाल्यो। शंकर र सम्झनाले कम्मर नमर्काएका गीत विरलै देखिन थाले। त्यो समय सम्झदै शंकर भन्छन कतिपय दर्शकहरुले त शंकर सम्झना बुढाबुढी नै हुन भन्ने सोच्दा रहेछन। कतिपय ठाउमा उनले त्यस्ता प्रश्नको सामना पनि गर्नुपर्यो।
नाचेरै गिनिज बुकमा नामः
संसारमा एउटै मान्छे कतिवटा गीतमा नाच्न भ्याउछ ? कतिवटा गीत निर्देशन गर्न भ्याउछ ? आफुले अभिनय गरेका गीत निर्दैशन गरेर हजारौं गीतमा गरेको मिहेनतलाई गिनिज बुकमा लेखाउन अभिनय र निर्देशन गरेको प्रमाण जुटाउँदैछन् । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने सोच छ उनको। त्यसको लागी आवश्यक प्रकृया पुरा हुँदैछ। गिनिज बुकमा नाम लेखिनु अगाडि उनले काम गरेका भिडियोको संख्या अझै बढ्नेछ ।
शंकर विसीले धेरै नयाँ समकालीन र पुराना मोडलहरुसँग काम गरेका छन् । कति त उनको सम्झनामा छैनन तर पनि सम्झना बुढाथोकी, गीता राई, रन्जीता गुरुङ, पार्वती राई, पुर्णीमा श्रेष्ठ, रश्मी तामाङ लगायत मोडलहरुसँग उनले धेरै काम गरे। निकै नै सम्भावना देख्छन अहिले आएका नयाँ मोडलहरुमा पनि उनले। नयाँहरुसँग पनि उनले उत्तिकै काम गरिरहेका छन् ।
दिपासा विसी, अन्जली अधिकारी, रविना भण्डारी लगायत नयाँ मोडलहरुमा निकै सम्भावना देख्छन उनी। अहिले भिडियो निर्माण बजेटका हिसावले पनि राम्रो र क्वालिटीका हिसावले पनि गुणात्मक हुँदै गएकोमा उनलाई खुशी लाग्छ रे। मोडलहरुसँग उनको व्यवसायिक सम्बन्ध मात्र रहेन । नायीका रेखा थापा र मोडल गीता राईसँग उनले तिहारको टिका लगाएर बहिनी बनाएका छन र अन्य मोडलहरुसँग पनि उनको राम्रो मित्रता रहेको छ रे।
सोखिन मोडलहरुसँग काम गर्दाको अनुभवः
सौख पुरा गर्न र आफै पैसा लगानी गरेर काँचको पर्दामा अनुहार देखाउन भिडियो खेल्ने अव्यवसायिक मोडलहरुको कारण व्यवसायीक मोडलहरुको काममा नकारात्मक प्रभाव परेको उनी स्विकार्छन। खास गरी विदेशतिर बस्नुहुने दाजुभाईहरुमा त्यो सौख निकै रहेको देखे उनले। त्यस्ता मोडलहरुलाई निर्देशन गर्नु र राम्रो भिडियो बनाउनु निकै चुनौतिको विषय हो भन्छन उनी। तर बाध्यता छ, धेरै भिडियोहरुको लगानीको श्रोत नै त्यस्तै नयाँ मोडलहरु हुन भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
मोड्लिङ र अभिनयमा स्थापित हुन चाहनेहरुले प्रवेशद्वार मै लगानीको भोटेताल्चा भेट्ने अवस्था आईपुगेको थियो एकपटक। लगानी नगरी डेब्यु हुनु असम्भव जस्तै भएको थियो तर विस्तारै समय बदलियो । गुणस्तरीय भिडियो बनाउनेहरुले व्यवसायीक मोडलबाटै काम लिन थाले। यो प्रवृत्ती विस्तारै हराउछ भन्ने उनलाई लागेको छ।
शंकर विसीको समयमा मोडलिङ र अभिनयमा आएका केही मोडल सिनेमामा पनि स्थापित नाम हुन पुगे। दिलीप रायमाझी, विनोद श्रेष्ठ, सगुन श्रेष्ठ, सिबम पोखरेल ईत्यादी मोडलहरु उनका समकालीन हुन भने महेन्द्र गौतम, विजय थापा, बब्बु थापा, दुर्गेश थापा लगायत मोडलहरु उनका जुनियर हुन। समकालीन साथी र जुनियर सबै साथीभाईसँग उनको निकै राम्रो र सुमधुर मित्रता रहेको दावी गर्छन उनी।
शंकर विसी र कृष्ण फिल्मस एक अर्काका पर्याय बनेका छन् । कृष्ण फिल्मस भनेकै शंकर विसी भन्ने बुझ्छन कलाकारहरु । त्यहाँ उनको नृत्य सिकाउने स्कुल रहेको छ । सहकार्यको लागि बाबुराजा केसी हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि कृष्ण फिल्म्स कम्पनी उनको लक् नै हो भन्ने मान्दछन शंकर। धेरै बिद्यार्थीहरु उनीबाट नृत्य सिकेर र उनको सहयोयी निर्देशकको रुपमा काम गरेर अब्बल निर्देशक बनिसके। त्यसरी आफुले सिकाएका अनुजहरुले प्रगति गरेको देख्दा उनलाई निकै खुशी लाग्छ रे। कतिपय अनुजहरु अब्बल निर्देशक मात्र भएका छैनन् दमदार प्रतिष्पर्धा गरेर सांगीतिक क्षेत्रमा दह्रो खुट्टा टेकिसकेका छन्। जहिले सुकै पनि प्रगति गरेका चेला चेलीहरुले सम्मान गर्दा उनको छाती चौडा हुने गरेको छ भन्छन उनी।
संख्या गन्ने हो भने उनले ९२ वटा फिल्मका गीतमा कोरियोग्राफी गरेका छन। सुरुमा सगुन श्रेष्ठ, सम्झना बुझाथोकी लगायत साथीहरु मिलेर बेरोजगार भन्ने फिल्म पनि बनाए। त्यो समयमा निकै राम्रो विषयवस्तु छानेर फिल्म बनाएको भएपनि फिल्मले सोचेजस्तो सफलता पाएन। उनलाई फिल्मका गीत कोरियोग्राफी गर्ने अफर भने आईरहे । निकै चर्चित सुर्केथैली, फस्ट लभ, रावण अन्दाज, वितेका पल, लंका, मेरो जिवन साथी लगायत उनले कोरियोग्राफी गरेका दर्जनौ सिनेमाका गीत सुपर हिट भएका छन।
भिडियो बनाउँदा कहिलेकाँही अचम्मका सुर ताल नमिलेका नौसिखिया कलाकारहरुका गीतहरु आईपर्थे। निर्देशक भएका नाताले जस्तोसुकै गीत भएपनि भिडियो तयार पारेर दिनु उनको धर्म थियो। ककिलेकाँही उनलाई आफै पनि गीत गाउन सक्छु जस्तो लाग्थ्यो। फलस्वरुप उनले गीत गाए पनि। तिम्रो कसम, जिन्दगीको लामो यात्रा, मैले अतित सम्झे भने आँखा रसाउंछ, तिम्रै मुहार लगायत आधादर्जन जति गीत उनले गाएपनि। अहिले पनि युट्युबमा उनका गीतहरु भेटिन्छन् ।
साथीभाई विचमा शंकरः
साथीभाई, जमघट र रमाईलो भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन शंकर विसी। त्यस्ता कुनै पनि ग्यादरिङहरु सकेसम्म छुटाउँदैनन् । उनको घरमै पनि साथीहरुको जमघट लागीरहेको हुन्छ । दिनरात सुटिङमा ब्यस्त भएर पनि रमाईलोको लागी समय त जसरी पनि निकाल्नै पर्छ उनलाई ।
लामो समय काममा ब्यस्त भए भने त्यसपछिको फुर्सद काठमाडौबाट केही पर पुगेर विताउँछन् । त्यसरी जमघट गर्ने उनीहरुको समुह नै बनेको छ। कसैको जन्मदिन होस पर्व होस या विदाको समय त्यसलाई भरपुर उपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन उनीहरु। गोदावरी, शिवपुरी, धुलिखेल, ककनी उनीहरु गईरहने ठाँउहरु हुन प्राय सप्ताहन्तको समय त्यतै भेटिन्छन् उनीहरु।
शंकर विसी विवादबाट टाढै रहने कलाकार हुन। आजसम्म उनी संग संगत गरेका व्यक्तिहरुले उनलाई गौ प्राणी भन्ने गर्दछन। विरलै रिसाउने शंकर लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको राष्ट्रब्यापी प्रतियोगीता आयोजनाको क्रममा एकजना युट्युबर संग रिसाए।
शंकर विसी त्यसरी रिसाएको दृष्य बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भयो। पछि युट्युबर र शंकरको मिलापत्र त भयो तरपनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उनको जातियता काढेरै आरोपहरु लगाईरहे। त्यो विवाद नियतवस भएको विवाद थिएन तरपनि उनले निकै गालिहरु खानुपर्यो। त्यस किसिमको विवादमा कहिल्यै फस्न नपरोस भनेर अचेल निकै सजग रहन्छन उनी।
राजनीतिमा उनलाई खासै चासो छैन। आफुलाई मतदाताको रुपमा चिनाउन चाहन्छन उनी । भोट पनि दल भन्दापनि उम्मेदवार हेरेर दिने गरेका छन। हर्क नेपाली युवाहरु राजनीति प्रति सचेत हुनुपर्छ तर दलको कार्यकर्ता बन्ने या नबन्ने भन्ने कलाकारको स्वतन्त्रताको कुरा हो।
संसारभरी नै कलाकारहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेर देशको महत्वपुर्ण पदमा पुगेको देखेका छन उनले त्यसैले राजनीति खराब कुरा हो जस्तो लाग्दैन तर राजनीति उनको लागी भने होईन भन्ने उनको धारणा रहेको छ। राजनीतिमा जान र जम्न निकै चलाख हुनु पर्दछ तर आफु आफ्नो काममा मात्र फोकस हुने स्वाभावको कारण सकृय राजनीति उनको चासोमा कहिल्यै पर्न सकेन। कोही कलाकार सकृय भएर दलिय राजनीतिमा लाग्छ भने उनी नराम्रो मान्दैनन रे।
शंकर एकदमै रमाईला निर्देशक हुन। सुटिङ स्पटमा चुड्कीला भनेर र अन्य रमाईला सम्वाद गरेर कलाकारलाई रमाई रमाई काम गर्ने बनाउने उनको बानी नै छ। कतिपय निर्देशकको काम विग्रदा र रिटेक हुँदा रिसाउने बानी हुन्छ तर उनी कहिल्यै कलाकारसँग रिसाउदैन रे । टेक खाने कलाकारहरुलाई हसाएर खुशी बनाएरै उनी अर्को टेकको लागी तयार पार्छन। नयाँ र पुराना सबै कलाकारसंग उनी उस्तै ब्यबहार गर्छन रे।
संघ संस्थामा आवद्दताः
शंकर विसी सानै देखी स्थानीय स्तरका क्लवहरुमा आवद्द थिए। अहिले भने लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव रहेका छन । लायन्स क्लव लगायतका सामाजिक संस्थाहरुमा उनको आवद्दता रहेको छ।
आफ्नो कारण अरु कसैको चित्त नदुखोस भनेर सधैं सजग रहने शंकर सधैं सबैको नजरमा राम्रो मान्छे हुन चाहान्छन रे। कलाक्षेत्रमा लागेर उनले आफ्ना दर्शकहरुको लागी अहिले सम्म के गरे त्यो समयलार्इ मुल्यांकन गर्ला भन्नेमा आशावादी छन्। आफुले देश र दर्शक श्रोताको लागि अझै कति काम गर्न सक्छु भन्नेकुरा उनी सोचिरहन्छन। शंकर भन्छन अझै धेरै समय बाँकी छ, काम त धेरै गरिएला।आज जुन १४ तारिक परेको उनको जन्मदिनको उपलक्षमा हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना !
जापानले १ सय ४२ वर्षपछि किन घटायो वयस्कको उमेर ?
‘नेपालका यी व्यक्तिहरु जसलाई जीवित छँदैं श्रद्धाञ्जली दिइयो’